प्रवक्ता शर्माको प्रश्न ओलीलाई : राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोई ? - OSNepal
प्रवक्ता शर्माको प्रश्न ओलीलाई : राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोई ?
फाल्गुण २१, २०७७ शुक्रवार १७:३१ बजे
काठमाडौं २१ फागुन । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ समुहबिच भएको तिनबुँदै समझदारी पत्रमा राज्यलाई हतियार बुझाउने बुँदा खोई भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेका छन् । आज सरकार र विप्लवबिच तिनबुँदै सहमतिमा हस्ताक्षर भएको विषयलाई लिएर प्रवक्ता शर्माले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
उनले भनेका छन्,प्रचण्ड आउँदा खोलाले बगायो थोरै हतियार,
विप्लव आउँदा पुरै ? राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोई ? सिंगो देशले यही गम्भिर प्रश्नको जवाफ चाहान्छ भन्दै प्रवक्त शर्माले ओलीलाई प्रश्न गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् :फागुन २३ गतेबाट सञ्चालन हुने दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रमका लागि १५ केन्द्र तोकिए ;्काठमाडौँ, २१ फागुन- काठमाडौँ महानगरपालिकामा यही फागुन २३ गतेबाट सञ्चालन हुने कोभिड–१९ विरुद्ध दोस्रो चरणको खोपका लागि १५ वटा केन्द्र तोकिएको छ । यस चरणमा ५५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र सार्वजनिक यातायातका चालक, सहचालकलाई खोप दिने योजना रहेको कामपाले जानकारी गराएको छ । खोप लगाउने केन्द्र अस्पताल नै हुनुपर्ने भएकाले कामपाले १५ अस्पताललाई केन्द्र तोकेको छ । वडा छुट्याएर केन्द्र तोकिए पनि परिचय खुल्ने फोटोसहितको परिचयका आधारमा पायक पर्ने अस्पतालमा खोप लगाउन सकिने कामपाको भनाइ छ ।
सबै केन्द्रमा खोप कार्यक्रम बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ । उहाँका अनुसार खोप लगाउन जाँदा नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, चालक अनुमतिपत्र, कार्यालयको परिचयपत्र लिएर जानुपर्नेछ । परिचयपत्र उपलब्ध नहुनेका लागि सिफारिस आवश्यक पर्नेछ । ‘कोभिड–१९ रोगविरुद्धको खोप अभियान, कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७७र०७८’ मा पालिकाका अध्यक्षरप्रमुखको संयोजकत्वमा पालिका समन्वय समिति र वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा समन्वय समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।
ओली–ठाकुरबीच निकटता, आगामी चुनावमा सहयात्रासम्म जानसक्ने